I Love Ubalaseleyo — UHAMBO LEE
I Love Ubalaseleyo
Wonke umntu ufuna ukuthandwa. Enoba yavuma okanye a, sonke esi mnqweno wemvelo ukuze bazive ngummi kwaye kakhulu nangabanye. Abaninzi kuthi sichithe ubomi bethu bonke ukufuna umntu uyasithanda, ethembe ukuba umntu othile- nabanina- anelise le ndilangazelela ngaphakathi.
Kulungile ukuba wena uceba ukuphulukana wena romance namhlanje wena Siyathemba ukuba uya ekugqibeleni oko iku-, Ndifuna ukwazi ukuba uwufuna lisezantsi kakhulu. Uya kufumana uthando inkulu bonke kwesibane ukukhanya dinala ngobu. nokuba, kukho onamandla onke, zonke ezanelisayo, uthando olugqibeleleyo ezifumanekayo kuwe. Kukho uThixo okuthandayo ngaphezu kokuba zibina. Uthando lwakhe akaguquguquki kwaye musa ukuba woo kuye okanye benzele.
Ngaba UThixo Love Kuthi?
Ndiyazi amaxesha amaninzi kuthi bayazibuza ukuba uThixo uthanda ngokwenene kuthi. Kubonakala kude. Kwaye mhlawumbi singavuya kuyeka bethingaza ukuba wenza into ukwenza kucace ukuba. Kwethu inyaniso, Sele ekwenzile. IBhayibhile ithi, "UThixo ubonisa uthando lwakhe kuthi ngaloo sakubon 'ukuba sisengaboni, UKristu asifele.”
Kwaye kwakhona uthi, "Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.”
UThixo sele ulubonakalisile uthando lwakhe kuthi ngendlela engathethekiyo, ngokunika uNyana wakhe kuthi. Musa ukuyigatya senzo sikhulu sothando kwimbali zehlabathi. Musa ukuyigatya othanda umphefumlo wakho. Endaweni kufumana ukuba uthando thembela kuYesu.
Kuba abo kuthi abo bakholwayo kuye, akukho nto ehlabathini ukuba kuze ukusahlula eluthandweni lukaThixo. Yaye uthando lwakhe ngabantu bakhe mkhulu kangaka, ukuba akanakuze ukwenza nantoni na ukuze uthando ngaphezu sele Yena.
Ngoko ngoSuku lo lweValentina, uthabathe ifam intliziyo. Awunayo ukuba bajonge naziphi na ezinye. UThixo uthanda ukuba ngokunzulu
Dj Mas okanye uSamson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:37 mna • impendulo
Siyabonga Trip Lee wena Inspiration lokwenyaniso ebomini bam God Bless wena!!!
Violetchirwa • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:38 mna • impendulo
am ukuze tached
Carolyn • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:38 mna • impendulo
Tru ukuba, ubhuti wam. Nice ukubona gen elandelayo othatha unobangela. Ngamana uThixo banzi indawo yakho kunye nempembelelo Yena.
Makhe nithandazelane njengokuba sifuna ukuba bamthobele.
Kathy Washington7 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:38 mna • impendulo
Yakuthanda, Triplee!!! Xa comin’ ukuya ePort?????
kayla:) • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:38 mna • impendulo